Zucchini kunye neParmesan | Ukupheka kweKhitshi
UHana mitchell | | Ukutya, Iiresiphi zemifuno, Iiresiphi ezisempilweni, Iiresiphi ezilula
Namhlanje ndikuzisela into emnandi nesempilweni ye-pasta ngokuqinisekileyo eya kukushiya ungakhathali. Ngaba uyafuna ukukhathalela umgca kodwa unobunzima bokumelana nembasa elungileyo yemacaroni? Kwenzeka into efanayo kum, yiyo loo nto ndifumene kule recipe ye-zucchini kunye ne-parmesan usindiso lwam. Ngaphandle kokuba sempilweni, sisitya esilula kakhulu nesinexabiso eliphantsi (ufuna kuphela izithako ezi-3). Kuya kufuneka uyazi ukuba ungakhohlisa njani isisu sakho!
Ndilindele ukugxekwa kwakho!
Ngaba unqwenela ipasta kodwa kukutya? Ngale recipe ye-zucchini kunye neParmesan uyonwabele isitya semifuno ngokungathi sisitya se-macaroni esingazange senziwe ngaphambili.
9-11 iitumato zetsheri
Sihlamba i-zucchini, sizinqumle zibe yimicu ye-julienne kwaye sizipheke imizuzu emi-5, simise kwaye sigcine.
Kwi-wok, shushu iitispuni ezimbini zeoyile yomnquma kwaye ungeze iitumato zetsheri ezisikwe kwisiqingatha. Sivuselela imizuzu emi-2 kwaye songeza i-zucchini ephekwe ngaphambili. Yongeza ityuwa ukunambitha kwaye usonge imizuzu emi-2.
Sitya kwaye sifefa itshizi yeParmesan ngaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi ezikhethekileyo » Ukutya » Zucchini iParmesan
Amaqanda aqhekezayo ane-zucchini